फिल्मका माध्यमबाट शाहरुख खान हरेक पटक यो साबित गर्ने प्रयासमा हुन्छन् तर नेटफ्लिक्समा चलिरहेको डेबिड लेटरम्यानको शो मा यो प्रमाणित गराए। यो शोमा शाहरुख खानले आफ्ना फ्यानहरुले हेर्न पाउने गरी किचनमा खाना बनाए। खानले डेबिडको
परिवर्तनको सास्कृतिक तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
परिवर्तन युवा समुहको सास्कृतिक तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शुभदिपावालि तथा छथ पर्वको अवसर पारेर नव कलाकारहरुको हौसला र अन्र्तनिहित प्रतिभालाई प्रष्फुटन गराउने उदेश्यले उत्त कार्यक्रम गरिएको हो । धनकुटा बेलाराङमा
'बुर्ज खलिफाबाट साहरुखलाई जन्मदिनको शुभकामना'
विश्वको सबैभन्दा अग्लो टावर दुबइको बुर्ज खलिफाबाट बलिउडका नायक साहरुख खानलाई जन्मदिनको शुभकामना दिइएको छ । शनिबार बेलुकी साहरुख अभिनित चलचित्रको गीतसँगै बुर्ज खलिफामा करिब १ मिनेट लामो भिडियो प्ले भएको थियो । जसमा &lsquo;ह्याप्�
अक्षय कुमारसँग २६० करोडको प्राइभेट जेट, '८० करोडको बंगलासहित यस्ता छन् पाँच अत्यधिक महँगा वस्तु'
बलिउडका खेलाडी कुमार भनिने अक्षय कुमारको सेप्टेम्बर ९ मा जन्मदिन हो । सन् १९६७ को सेप्टेम्बर ९ मा अमृतसरमा उनको जन्म भएको थियो । अक्षय कुमारको वास्तविक नाम राजिव हरिओम भाटिया हो । सन् १९९१ मा रिलिज भएको फिल्म &lsquo;सौगन्ध&rsquo; बाट बल�
सेल्फीले भेटायो १७ वर्ष पहिले छुटिएका दिदीबहिनी, 'नर्सले नै चोरेकी थिइन्'
दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनमा १७ वर्ष पहिले बाल्यकालमा नै छुटिएका दुई दिदीबहिनीलाई सेल्फीले भेटाइदिएको छ । जन्मिएको तीन दिनपछि कान्छीलाई एक नर्सले चोरेर लगेकी थिइन् । संयोगले दुवै जना एउटै स्कुलमा भेटिए । केपटाउनकी बेटी मिसेल�
'अजय देवगनसँग विहे गर्नुको कारण खुलाइन काजोलले'
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् काजोल । बेखुदीबाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी उनले कैंयौ भारतीय चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । उनको अभिनय रहेका प्रायः चलचित्र हिट छन् । २५ मे १९७२ मा जन्मिएकी काजोलले २५ वर्षको उमेरमा बलिउड अभिनेता अ�
'कलाकारको देउसी भैलो स् एकै घरमा ४ लाख झर्‍यो' (भिडियो सहित)
काठमाडौं १० कार्तिक र नेपालीहरुको दोस्रो महानपर्व तिहारलाई सफल पार्न लोक कलाकारहरु जम्मा भएर देउसीभैलो खेलेका छन् । लोकदोहोरी कलाकारको छाता संगठन लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको आयोजनामा देउसी कार्यक्रम भएको हो । लोक तथा दो
चलचित्र ‘घरजम’ धरानमा पद्रर्शन हुदै
&nbsp;मौलिक नेपाली कथानक चलचित्र &lsquo;घरजम&rsquo; धरानमा विशेष&nbsp; पद्रर्शनी हने भएको छ । मौसम ईम्बुङद्धारा निर्देशित चलचित्र &lsquo;घरजम&rsquo; काक्तिक ९ गते धरान स्थित गणेश टाकिजमा प्रर्दशन हुने भएको हो । बिहिबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै च�
उमेर काटेपछि बसेकाे माया प्रिती : बाटोमा भेट भयो साईली सार्वजानिक (हेर्नुहाेस् भिडियो सहित)
औजार दैनिक धरानका अध्यक्ष: मोतिराज सुनुवारको बाटोमा भेट भयो बोलको गितको म्युजिक भिडियो सार्वजानिक भएको छ । बिहीबार प्रदेश नं. एकका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले भिडियोको सुभमुहरत गरेका थिए । उनले बधाइ तथा गितको सफलताको शुभकाम
बाबा काण्ड ! अघोरी बाबाको लब पुरानै थियो यो : 'सव देखावटी नाटक मात्रै हो' (हेर्नुहोस यो भिडियो)
पछिल्लो समय अहिले अघोरी बाबालाई नचिन्ने सायदै कोहि होलान् । उनी निकै भाइरल भएका बाबा हुन् । एकाएक मिडियामा भाईरल बाबाले केहि समय अगाडी बिहे गरेका छन् । मानव भएर मानवको कल्याणको बारेमा नसोच्नेहरु कामै नलाग्ने हुन् भन्दै उनले आक
4032 पटक पढिएको
हिमानी शाह लेख्छिन् – 'रुदैनन् कहिले जल्नेहरु ! रुन्छन् त केवल जलाउनेहरु' !
पूर्व युवराज पारस शाह र सोनिका रोकायाबीचको सम्वन्ध मिडियामा आएपछि पुर्व युवराज्ञी हिमानी शाह लगातार फेसबुकमा स्टाटस लेख्न थालेकी छिन् । आजमा मात्रै उनले २ वटा स्टाटस लेखेकी छिन् । पुर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले फेरी अर्को भाव�
'बिबाह पछि श्रीमती सहित मिडियामा अघोरी बाबा' (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका चर्चित अघोरी बाबाले बिहे गरेपछी एकाएक फेरि सामाजिक संजाल तातिएको छ । बाबाको बिहेलाइ लिएर विभिन्न टिप्पणी हुँदै आएको छ कतिले राम्रो भयो राम्रो गरे भन्दैछन भने कतिले यो गलत गरे भन
पूर्व युवराज पारसबारे मोडल सोनिका रोकायाको 'नयाँ खुलासा'
कोहीसँग बोल्दैमा, भेट्दैमा ऊसँग हाँस्दैमा हाम्रो समाजले नराम्रो सोच्छ तर अहिले त हामी एडभान्स भइसक्यौँ नि ! के सही हो, के गलत हो भन्ने छुट्याउन सक्छौँ। हाम्रो सम्बन्धको कुरा हल्ला मात्रै हो तर म उहाँसँग नजिक भाछु।लिक्विड लाउन्�
सुनुवारको दोस्रो गीतको म्युजिक भिडियो छायाङ्कन
धरान । मोतिराज सुनुवारको दोस्रो गीत &lsquo;बाटोमा भेट भयो...&rsquo; को म्युजिक भिडियो छायाङ्न सुरु भएको छ । बिहीबार धरान&ndash;१४ स्थित दन्तकाली मन्दीर नजिकै रहेको दुई धारेमा गीतको सुटिङ गरिएको थियो&nbsp;। त्यस्तै शुक्रबार धनकुटाको राजारानीम�
मिस्टर बिनका : 'छोरा गोर्खा रेजिमेन्टमा आवद्ध'
काठमाडौं । विश्वका चर्चित हास्यव्यंग्य कलाकार मिस्टर बिन अर्थात् रोवन एट्किनसनका छोरा बेन्जामिन एट्किनसन वेलायती सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ति भएका छन् । २६ वर्षका बेन्जामिन बेलायती सेनाका लेफ्टिनेन्ट हुन् ।तीन महिनाक�
2909 पटक पढिएको
धरानमा सुरज र महेन्द्रको सागिंतिक कार्यक्रम
फ्रेण्ड्स गार्डेन धरान ९ पुतली लाइनमा आउदो कार्तिक ९ गते चर्चित युवागायक सुरज तामाङ र महेन्द्र राईको सांगितिक कार्यक्रम हुने भएको छ । आउदै गरेको शुभदिपावलिको अवसरमाउत्त सांगितिक साझ हुन गईरहेको हो । द भोईस अफ नेपाल र नेपालआईड�
यस्तो तस्बिरका कारण 'एकाएक चर्चामा आइन निशा अधिकारी'
काठमाडौं । कनै समयकी चर्चित नायिका निशा अधिकारी अहिले यो क्षेत्रबाट अलिक टाढा पुगेकी छिन् । उनले हालै इन्स्टाग्राममा स्तनपानको तस्बिर सार्वजनिक गरेकि छिन् । उनले इन्स्टाग्राममा आफ्नो छोरा युभनलाई दुध पिलाएको तस्बिर सार्वजन
यो हो सुनले बनेको 'संसारकै महँगो बिमान र हेर्नुहोस'
मानिसहरु समयको सदुपयोग गर्दै चाँडोभन्दा चाँडा गन्तव्यमा पुग्न हवाइजहाजको प्रयोग गर्छन् ।विमानको विषयमा विभिन्न रोचक घटनाहरु सार्वजनिक भइरहँदा केही विषय तपाईलाई थाहा हुन सक्छन् केही नहुन पनि सक्छन् । आज हामीले एउटा सुनै सुन
यिनै हुन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको एकमात्र छोरी सी मिङ्जे, 'जो यति शक्तिशाली छन्'
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको एकमात्र छोरीको नाम हो सी मिंङजे । उनको जन्म सन् १९९२, जुन २७ सिचुआन प्रान्तको फ्यानियनमा भएको थियो । उनकी आमा एक प्रसिद्ध लोक गायिक हुन्। उनी २००६ देखि २००८ सम्म हाङजोङ फरेन ल्याङवेज स्कूलमा पढिन�
'निक जोनस किन भए ट्रोलको शिकार'
अमेरिकी कलाकार निक जोनसले शुक्रबार आफ्नी पत्नी अभिनेत्री पियंका चोपडाका लागि प्रेम भावसहितको ट्वीट गरे । ट्वीटमा निकले लेखेका छन्, &lsquo;मेरी श्रीमती भारतीय हुन्। उनी हिन्दू हुन् र उनी हरेक दृष्टिमा उत्कृष्ट छिन्। उनले मलाई आफ्�